तपाई विदेशबाट फर्कदै हुनुहुन्छ? हेर्नुस के के ल्याउन पाउनुहुन्छ? कति लाग्छ भन्सार – Taja Media
तपाइँ बिदेशमा हुनुहुन्छ र नेपाल आउने तयारि गरि रहनु भएको छ भने तपाइले आफु संग के के लिएर आउँन पाउनु हुन्छ र के लिएर आउदा तपाइले भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ ? त्यस बारेमा जानकारी राख्दा तपाइका लागि सजिलो हुनेछ। नेपाल सरकारले विभिन्न सामानलाइ फरक फरक भन्सार तोकेको छ भने कतिपय समान हरु तपाइले बिना भन्सार पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले तपाइलाइ भन्सार तिरेर र भन्सार छुटमा के के समान ल्याउने सुबिधा दिएको छ, त्यस बारेमा जानकारी पाउनु हुनेछ।
भन्सार छूटमा ल्याउन पाइने सामान
टेलिभिजन र रक्सीको लागि यस्तो नियम
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तिमा लगातार १२ महिना विदेशमा काम गरी फर्केका नेपालीले ३२ इन्चसम्मको एउटा टेभि निःशुल्क ल्याउन पाउने छन् । त्यो भन्दा माथिको टेलिभिजन सेट ल्याएमा भने दरवन्दीअनुसार नै भन्सार तिर्नुपर्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सुन कति सम्म ल्याउन पाइन्छ ?
तपाईले साथमा १ सय ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउनुहुन्छ । जसमध्ये पहिलो ५० ग्रामसम्मको सुनलाई प्रति १० ग्राम ९ हजार ५ सय रुपैयाँ र पछिल्लो ५० ग्राम सुनको भने प्रति १० ग्राम १० हजार ५ सय भन्सार शुल्क तिरेर ल्याउनु पाउनु हुन्छ।
सुनको गहनाको हकमा भने विदेशबाट फर्कदा ५० ग्रामसम्म भन्सार नतिरी ल्याउन पाइनेछ । तर, त्यो भन्दा बढी अधिकतम २ सय ५० ग्रामसम्मको गहना भन्सार तिरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ।
यस्ता छन् भन्सार तिरेर ल्याउन पाइने सामानहरु
यात्रुले भन्सार महसुल तिरेर आफ्नो साथमा थप सामान म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिरेटर, वासिङ मेसिन, पंख्या, रेडियो, सिठि प्लेयर र डिभिसी प्लेयर एक/एक थान साथमा ल्याउन पाइने भएको छ ।
लुगाफाटो, जुत्ता, कस्मेटिक सामान बढीमा १५ थानसम्म, घरायसी प्रयोगका सामान (मिक्स्चर, जुसर, सिलाई मेसिन, ग्याँसटेबुल, इस्त्री, राइसकुकुर लगायत)सामान दुई/दुई थानसमेत भन्सार तिरेर नेपाल ल्याउन पाइने भएको छ ।
बिस्तृत जानकारीका लागि नेपाल भन्सार बिभागको वेबसाइटमा हेर्नुस होला